Abantu Bafuna Umculi Wase-Chinese Hentai Aboshwe (Impikiswano) - Okunye
Abantu Bafuna Umculi WamaHentai WaseChina Aboshwe Ngemuva Kokuhlukumezeka Kwabesifazane Abathobile
Kubonakala sengathi i-anime nanoma yini ehlobene ne- 'hentai' ayikwazi ukubamba ikhefu. Kukhona njalo ezinye impikiswano noma ukuhlubuka siyaqhubeka.
Lesi sikhathi sizungeze i-JM, umdwebi we-NSFW odala izinhlamvu ze-anime ne-hentai.
Izingqikithi zakhe zivame ukuqhutshwa ngokocansi. Futhi unochungechunge lwakhe olwakhelwe ezungeze ubuciko bakhe.
Iwebhusayithi Entsha Yokuxhasa
Iwebhusayithi exhasiwe yi-JM: https://t.co/47Asu0Mnh8
UPatreon wangivimba, ngakho ngivele ngazenzela eyami iwebhusayithi! pic.twitter.com/UCEV4NCbrB
- JM | I-Aristocrat Yasebukhosini (@TeikokuKizoku) Novemba 16, 2020
Lo mculi uvinjelwe kuPatreon ngemuva kokuthi uchungechunge lwakhe oluthi “Empire” lusolwa.
Ngokusho kweTone Sixth:
“Umsebenzi wakhe wobuciko uthukuthelise ababukeli ngokuvumela ukuhlukunyezwa kwabesifazane nokufaka izingqikithi ezifana nokulethwa kwabesifazane okungenamibandela kanye nokuhlonywa kwabesilisa. Olunye ucezu olunjalo luphakamise ukuthi abesifazane kufanele banqatshelwe ekutholeni isisindo noma ekusebenziseni izinto zokuvimbela inzalo, kanti enye iveze owesifazane njenge-coronavirus yenoveli ebulale abantu abayizigidi eziyi-1.4 emhlabeni jikelele.
Ikakhulukazi, abantu bagxeke i-JM ngokuveza “abesifazane abaduduzayo” - njengoba izigqila zocansi zaseChina ezigcinwa amasosha aseJapan phakathi neMpi Yesibili YamaSino NamaJapane kwesinye isikhathi aziwa - ngendlela “engahloniphi nehlisayo”. ”
Abantu abangama-4000 + eChina bafuna kuboshwe uJM
Ithoni lesithupha lathi:
“Ngemuva kokuthola umsebenzi kaJM muva nje, abaningi eChina banxusa iziphathimandla ukuthi zimvimbe noma zimbophe. I-hashtag enegama lomculi ihlanziwe endaweni yesikhulumi se-microblogging i-Weibo, futhi cishe bonke abaphenduli be-4,000 kwinhlolovo eku-inthanethi enkundleni yezokuxhumana uDouban bavumile ukuthi ubuciko be-JM kufanele buphikiswe ngenxa yezingqikimba zabo zabesifazane abangafanele abesifazane.
ucezu lwempilo yothando yamahlaya anime
'Umsebenzisi weWeibo ocele ukukhonjwa njengo-Amatoshi utshele iSixth Tone ukuthi eminye imisebenzi kaJM imshiye' ethukuthele futhi engakhululeki 'ngenxa yokuvezwa kwayo okwethusayo kwabesifazane.
Yize abanye bengase baphikise ngokuthi umsebenzi womdwebi wenziwe ngobuciko futhi awutholakali emphakathini - njengoba ukwenza noma ukusabalalisa izithombe zobulili ezingcolile akukho emthethweni eChina, okujeziswa ngezigwebo zasejele - uzizwa sengathi kweqile. ”
Isibonelo esisindayo semidwebo kaJM
Umthombo wezindaba: https://www.sixthtone.com/news/
Yeka ukuthi iHentai 'Ngengozi' Ilimaza Ukuthandwa Kwama-Anime